बिवाह गर्दा पनि गाली, गर्भवती हुँदा पनि गाली, आखिर प्रियंका प्रति यति धेरै घृणा किन ? | TajaKhabarTV
२०७८, ७ श्रावण बिहीबार ०८:५३ July 22, 2021 ताजा खबरमनोरन्जन
अथवा घृणित र संकुचित सोच बोकेका फ्यानहरुको प्रतिक्रियाको ख्याल नगरी रमाएर गल्ती गर्याे याे जाेडीले ? हुन त हाम्राे नेपाली समाजमा श्रीमतीकाे पीडामा श्रीमान् दुख्ने, गर्भवती हुँदा हेरिविचार गर्ने परिपाटि अझै बनिसकेकाे छैन । श्रीमतीलाई कुटपिट गर्ने, अघि बढ्न नदिने, खुट्टा तान्ने चलन जाे छ । श्रीमती गर्भवती हुँदा उनको हेरविचार गर्नुको सट्टा बरू पुरुषहरु अवैध सम्बन्धतिर आकर्षित हुन्छन् । उनको हालखबर समेत सोधिँदैन ।
जति नै नराम्राे प्रतिक्रिया दिएपनि महिलाहरूले आयुष्मान जस्ताे समझदार श्रीमान् पक्कै पाउँदैनन्, न पाएका नै छन् । यति कसैले आफ्नाे नियतमा खोट नराखी नियाल्ने हाे भने केवल श्रीमान्-श्रीमतीबीचकाे प्रेम देख्नेछन् याे जाेडीकाे गतिविधिमा ।
गर्भवती हुँदा श्रीमतीकाे केयर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर परिवार विहिन एक श्रीमानका लागि पाठ हुन सक्छ । गर्भवती हुनु भनेकाे त एक महिलाकाे लागि स्वर्णिम अवसर हो । सबै भन्दा ठूलो आनन्दको पल हो ! याे बेला जति रमाउन सक्याे उति फाइदा । आखिर जीवन रमाउनकै लागि त हाे नि हाेइन र ? त्यसैले आफू पनि रमाऔँ, अरुलाई पनि खुलेर रमाउन दिऔँ ।